नयाँ जीवहरू, विश्वव्यापी चर्च अफ भगवान स्विजरल्याण्ड (WKG)
बीउहरू, प्याज, अण्डाहरू, क्याटरपिलरहरू। यी चीजहरूले धेरै कल्पना जगाउँछन्, हैन? जब मैले यस वसन्तमा बल्ब रोपेको थिएँ, म अलि संशयवादी भएँ। कसरी यी कुरूप, खैरो, भारी बल्ब प्याकेज लेबल मा सुन्दर फूल बाहिर ल्याउन सक्छ?
ठीक छ, केहि समय, थोरै पानी र थोरै सूर्यको साथ, मेरो सन्देह विस्मयमा यस्तो परिवर्तन भयो कि हरियो कीटाणुहरू पहिले मैदानबाट बाहिर हेरे। त्यसपछि कलियों देखा पर्‍यो। त्यसपछि यी गुलाबी र सेतो, १ cm सेन्टीमिटर फूलहरू खोलिए। त्यसैले कुनै गलत विज्ञापन! कस्तो चमत्कार!
एक पटक फेरि आत्मिक शरीरमा प्रतिबिम्बित हुन्छ। यसको वरिपरि एक नजर राखौं। ऐनामा हेरौं कसरी यी शारीरिक-दिमाग, स्वार्थी, व्यर्थ, लोभी, मूर्तिहरूको सेवा गर्न सक्छ (आदि) के मानिसहरू पवित्र र सिद्ध हुन्छन्, जुन १ पत्रुस १:१:1 र मत्ती .1,15. as holy मा भविष्यवाणी गरिएको छ? यसमा धेरै कल्पनाशक्तिहरू सामेल छन्, जुन भाग्यवश हाम्रो लागि, भगवान प्रशस्त मात्रामा हुनुहुन्छ।
हामी ती प्याज वा जमिनमा बिउहरू जस्ता छौं। तिनीहरू मरेको देखे। त्यहाँ कुनै जीवन देखिँदैन थियो। हामी इसाई हुनु भन्दा पहिले हामी हाम्रो पापमा मरेका थियौं। हाम्रो जीवन थिएन। र त्यसपछि केही चमत्कार भयो। जब हामी येशूमा विश्वास गर्न थाल्छौं, हामी नयाँ जीवहरू बनेका छौं। जुन शक्ति ख्रिष्टले मृत्युबाट जीवित पार्नुभयो उही शक्तिले हामीलाई मृत्युबाट पनि बिउँतायो।
२ कोरिन्थी :2:१:5,17 मा यसो भनिएझैं हामीलाई नयाँ जीवन दिइयो: “यसकारण यदि कोही ख्रीष्टको हो भने ऊ पहिले नै 'नयाँ सृष्टि' हो। ऊ जे भइरहेको थियो त्यो सकियो। केहि पूर्ण नयाँ (नयाँ जीवन) सुरु भयो! " (Rev. GN-1997)
ख्रीष्टमा हाम्रो चिनारीको बारेमा मेरो लेखमा, मैले क्रसको खुट्टामा "छानिएको" राखें। "नयाँ सिर्जना" अब ठाडो ट्र tr्कमा चल्छ। परमेश्वर हामी उहाँको परिवारको सदस्य भएको चाहनुहुन्छ; त्यसकारण पवित्र आत्माको शक्तिले उसले हामीलाई नयाँ प्राणीहरू बनाउँछ।
जसरी ती बल्बहरू अब मैले रोपेको जस्तो देखिँदैन, त्यसैले हामी विश्वास गर्छौं कि अब हामी पहिले जस्तो भएको व्यक्ति जस्तो छैनौं। हामी नयाँ छौं। हामी पहिले सोच्दैनौं पहिले जस्तो गर्छौं, अब कार्य गर्दैन र अरूलाई पहिले जस्तो व्यवहार गर्दैनौं। अर्को महत्त्वपूर्ण भिन्नता: हामी उहाँबारे अब सोच्दैनौं जुन हामी उहाँबारे सोच्दै थियौं। रे। जी। एन। १ 199725,16 ले २ कोरिन्थी:१ उद्धृत गरेको छ: “यसैले अबदेखि म अबदेखि [शुद्ध] मानवीय स्तर [पार्थिव मूल्यमान्यताहरू] अनुसार न्याय गर्नेछैन, एक जना ख्रीष्टले पनि न्याय गर्नुभएन, जसलाई मैले पहिले न्याय गरेको थिएँ [आज मलाई थाहा छ] उनी पहिले भन्दा धेरै भिन्न थिए]। "
हामीलाई येशूमा नयाँ दृष्टिकोण दिइएको छ। हामी अब उसलाई पार्थिव, अविश्वसनीय परिप्रेक्ष्यबाट देख्दैनौं। उहाँ महान् शिक्षक मात्र हुनुहुन्नथ्यो। ऊ मात्र राम्रो मान्छे थिएन जसले सही जीवन बितायो। ऊ संसारमा बन्दुक राख्न चाँडो थिएन।
उहाँ प्रभु र उद्धारक हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्वरको छोरा। उहाँ हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। उहाँ नै एक हुनुहुन्छ जसले हामीलाई आफ्नो जीवन दिन आफ्नो जीवन दिनुभयो। उसले हामीलाई नयाँ बनायो।